Wararka laga soo xigtay AutoCAD 2012 | Isbedelka - Qodobka
Maarso, 2011 AutoCAD-AutoDesk
Waxaannu nahay dhawr maalmood ka dib markii aan aragno digniinta ugu horeysa ee waxa keena mar kale AutoCAD 2012, mashruuc la mid ah sida Iron-Man. Ka hor inta taasi dhacdo, waxaan dib u eegay fikradaheyga bilawgii sannadka iyo isbarbardhigga dushiisa in kuwa iibiya degaanka ay sii daayeen.
Kuwa soo socda waa miisaan isbarbardhig ah oo ah munaasabadda aan ku aragney afarta nuqul ee ugu dambeeya ee AutoCAD. Inkasta oo ay jireen waxyaabo kale oo badan oo jira oo soo hagaagay, tani waa hal-abuurka sannadka oo dhan.
Waxaa la ogaan karaa in saameynta ugu weyn ee 2008 ay aheyd awoodda ay ku dhex galaan (soo dejinta) qaababka DGN iyo wax la mid ah Excel.
Kadibna 2009 isbedel wayn ayaa ah Ribbon Markii hore, waxay u muuqatay mid xagjir ah, laakiin u dhaxaysa 2010 iyo 2011 waxaa suurtagal ah in la arko xoog ku adkaysiga si looga fogaado faragelinta yar ee shaqada iyo shakhsi ahaaneed. Sidoo kale heerka gaarsiinta, ViewCube wuxuu ahaa mid cusub.
2010 haysaan caqabadaha AutoCAD si ay u noqdaan sidoo kale fallaadhaha xoogaa xariifnimo horumar ka lalinaysay ee jaamcadda 3D, qabashada files PDF iyo taageero madbacadaha 3D.
Warka ku saabsan AutoCAD 2011 ayaa u muuqda, way adagtahay in la fahmo sababta ay u qaataan waqti dheer, caddaynta iyo maareynta walxaha la midka ah. Taageero aad u faa'iido leh darajada dhibcaha, iyo sii wadidda hagaajinta 2010, 3D maaraynta maaraynta korodhka ayaa la kordhiyaa.
Xogta lala xiriirinayo Excel
DGN 8 Dibedda, Dhoofinta, iyo Hooska
Ribbon Hagaajiyay Hagaajiyay
Qalabka Helitaanka Gacanta
Hagaajinta Shirkadaha Hagaajiyay
Muuqaalka Autodesk Hagaajiyay
Autodesk raadso Hagaajiyay
Diiwaanka Tallaabada Hagaajiyay Hagaajiyay
Joomatiga Qalabka Cilmiga
Ciladaha Joometiriga Hagaajiyay
Caqabado Culus Hagaajiyay
Mesh Editing Hagaajiyay
Dejinta bilowga hore
CUIx Faylka Faylka
Wareejinta Shatiga ee Online
Caqabadaha la soo gudbiyey
Sheyga / Lafdhaqaaqa isweydaarsiga
Qari Faraha / Waxyaabaha Qashinka ah
Xulo walxo la mid ah
Abuurso agabka la midka ah
Kusoo dhaweynta Screen
Taageerada Cilmiga Bulshada
Horumarinta 0 ee warar laga soo qaaday sanadihii hore 12 wararka
Horumarinta 5 ee warar laga soo qaaday sanadihii hore 9 wararka
Horumarinta 7 ee warar laga soo qaaday sanadihii hore
Marka, fiiri wixii dhacay afartii sano ee la soo dhaafay, waxaan u qaadan karnaa waxyaabahan soo socda:
1. Cusbooneysiin dheeraad ah ee AutoCAD 2012.
Sida ku xusan sheekada, xitaa noocyada AutoCAD marwalba waa mid aad u fiican, iyada oo qaybaha kala duwan ay diiradda saaraan sii wadida horumarinta hore. Taasina waa sababta aan u xusuusto noocyo badan sida R12, 1998, 2000, 2002, 2006; oo waxaad arki kartaa isbeddelkan ku jira version 2010 marka la barbar dhigo 2011.
Ka dib, version of AutoCAD 2012 waxaan filan karnaa warar dheeraad ah oo ku saabsan dabeecadda guud, halkii ay diiradda saari lahaayeen arrimaha gaarka ah.
2. Raadi si aad u hagaajisid waxqabadka kooxda.
Munaasabadda, waxaa la rumeysan yahay in AutoCAD 2012 ay awood u yeelan doonto in ay soo bandhigto hawlgallo wanaagsan oo ku saabsan maareynta ra'yiga. Marka aynu tixraacno fikradaha, waxaan ka hadlaynaa meelaynta meelo kala duwan ee sawirka, aragtiyo kala duwan, oo leh layers qarsoon oo kala duwan, iyo in ay si firfircoon u shaqeeyaan. Sidaa daraadeed isbedel ka mid ah aragtida qof kale uma jeedo dib-u-soo-celinta sawirka, halka ay faa'iido badan u tahay in ay la shaqeyso dhowr dhowr-ilaaliye isku mar.
Si barnaamijyada tartankaan waxay baryaan views firfircoon, iyo sidoo kale dhisay hagaajin lahaa wax qabadka qalabka, maxaa yeelay bartey shaqeeyaan sidii index a da'ayeen ku salaysan ciidamo aan ku isticmaalka isla xasuusta ama u baahan tahay geeddi-socodka dheeraad ah.
Anigu waxaan qabaa shaki ihi haddii ay sii wadi karaan in ay ku sii socdaan version wadaag ah oo ka dhexeeya version Windows iyo AutoCAD for Mac. Sababtoo ah manzanita caddeynaya hirgalinta noocan ah isbeddel uma baahna salaadda diinta badan, laakiin sida ay u shaqeeyaan nidaamka PC-ga iyo maaraynta khayraadka Windows ayaa wax ka duwan. Waxay u badan tahay in Mac arki kartaa-waqtiga dhabta ah haya'ad iyo maamulka daruur dhibcood ku ool ah, laakiin PC malaha AutoDesk bilowga fekerayo diraya hababka kala duwan iyadoo la isticmaalayo qalabka taageerada kaararka garaafyada heerka this iyo si la soo dhaafay PC ka dhacsan GPU
Hadda, shaqada 3D AutoCAD 2011 wuxuu u baahan yahay Intel Pentium 4 ama AMD Athlon, 3 GHz; kiis kale oo Intel ah ama AMD-dual core AMD 2 GHz. 2 GB RAM. Sida aan ku aragno, ma aha inaan ahay sare ee silsiladda cuntada ee ugu fiican waxaan leenahay kumbiyuutarada ah, laakiin markii AutoDesk leeyahay "ama in ka badan" oo macnaheedu yahay in khayraadka habka waddaa, laakiin xoogaa niyadda xun ka ee isticmaalaha.
3. Horumarinta wararka hore, wax badan maahan.
Marka la eego isbeddelka, waxaan ku yeelan karnaa hagaajin cusub oo ku saabsan maaraynta Ribbon, laga yaabo inay suurtogal tahay inay sii wado si taxadar leh si ay shaqadu u isticmaali karto wax badan oo ku saabsan kormeerayaasha sii ballaadhan maalin kasta ama marka ay ka shaqeynayaan kormeerayaal badan. Inkasta oo aan leeyahay shaki iwm, waxay noqon kartaa wax kale oo aan awoodi karno in aan sii dheereyno, oo aan si dhakhso ah u helno waxa aan u isticmaalno si joogta ah, laakiin had iyo jeerba halkaas.
Sidoo kale waxa aan soo aragnay in la hagaajiyo awoodda 3D, taasoo ka soo bilaabaneysa taabato jaamcadda, ka dibna dusha, waxaan rajaynayaa in horumar laga habka haya'ad ah, taasoo keentay in Hababka badbaadi kuwa khuseeya haddii aan Daqsi fiican in aragtiyo firfircoon. Waxaa laga yaabaa in maaraynta agabyada iyo codsigoodu ay tahay mid wax ku ool ah hadda.
4. Maareynta hagaagsan ee walxaha
Halkan, waxaa la filayaa in sheyga loo kala qaybin karo, ma aha qasab in uu u geynayo blocks. Ka saar, ku rid qalabka cusub, fidinta, miisaanka, kooxda walxaha ilaalinta sifooyinka sida xajmiga qoraalka, qaabka xuduudaha, qiyaasta qaabka xariijinta, sababtoo ah mar dambe maaha maxbuus. Waxaan horeyba u qiyaasi karnaa adeegyadan si aan maareyno walxaha leh sifooyinka halkii aad samayn lahayd blocks ama aad u guureysid heer gaar ah.
Sidoo kale, macnaheedu waxa weeye, waxaa la filayaa in amarka amarka (hagaajinta) la hagaajin karo si uu u dalbado waddo, oo la mid ah wixii aan ku qabanno qaynuunka cabbirka leh ee ka soo horjeeda blockska. Hase yeeshe xajmiga 3D, iyo laga yaabee iyada oo isbeddel ku yimaada hal sawir oo kale, taas oo siin doonta fursad qaali ah oo lagu fulinayo naqshadaha qariibka ah ee 3D.
Waxaan arki doonaa maalmo yar waxa dhaca maalmo yar.
Post Previous«Previous Sawirrada muuqaalka iyo fiidiyoowga dhulgariirka iyo tsunami ee Japan
Post Next CAD dhawaado GIS ah | GeoInformatics March 2011Next »
2 Jawaab ah "Maxaa Cusub ee AutoCAD 2012 | Isbedelka "
Waxaan u maleynayaa inaadan si tartiib ah u akhrin. Waxay leedahay «Waxaa macquul ah in Mac aan arki karno haya-waqtiga dhabta ah ama maareyn dhibic hufan oo daruur ... »
Iyadoo la tixraacayo version cusub ee AutoCAD ee Mac, oo ilaa hadda hadda jira kaliya 2011 version, iyo sida ay u badan tahay.
Haddii aan arki doonno iyo haddii kaleba, waa arrin waqti qaadaneysa. Waxaan ku siinayaa sababta ay tani u maqan tahay, in kasta oo dadaallada aan ku aragnay masraxyada ka faa'iideysanaya tikniyoolajiyada CUDA ay mar hore u soo bandhigeen si hufan, sida aan ku aragnay GeoTec ee 2008. Waxaan ka soo qaadnay in tikniyoolajiyadda Luxology ay sidoo kale yeelan doonto horumarin ka sarreysa wixii aan hore u aragnay, marka ay bilaabanayso ka faa'ideysiga isku-dubbaridka badan.
CadDesigner isagu wuxuu leeyahay:
Way iga qoslisaa in aan u maleeyo in Mac kasta uu bixin karo waqtigiisa dhabta ah. Xaqiiqdu waxay tahay in in GPU Renderer uu ku yar yahay pallia, Nvidia (bixiyaha kaararka sawirada ganacsi iyo xirfadeed ee PC iyo Apple) wax yar ayey ka haystaan ​​tikniyoolajiyada CUDA, V-ray iyo hogaamiyaasha kale ee abaalmarinta bixiya ayaa ah kuwa aad u liita bixinta. waqtiga dhabta ah
Waxaan aaminsanahay in maqaalku uu yahay mid aan habooneyn oo aan fiicnayn, looma baahna xog faahfaahsan iyo ilo aan la isku halleyn karin